लालपुर्जा नेपालको, भूमि भारतीय कब्जामा – Puleso
२१ साउन, २०७७, बुधबार
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ लालपुर्जा नेपालको, भूमि भारतीय कब्जामा
पुलेसो २३ जेठ, २०७७, शुक्रबार ९:२६
झापा – लिम्पियाधुरा र कालापानी मात्र होइन, पूर्वी नेपालको सीमावर्ती झापाका विभिन्न ठाउँमा एक सय ७४ हेक्टर जमिन भारतले मिचेको पाइएको छ।
मिचिएको स्थानमा झापाका पाठामारी, मेचीखोला पारिको गाउँ, महेशपुर, मेचीपुल, भद्रपुर गलगलिया सीमा क्षेत्र, काँकडभिट्टा, बारिसजोत, मदनजोत, नकलाबन्दा, बाहुनडाँगीलगायत ठाउँ रहेको सीमाविद् डा. राजकुमार पोखरेल बताउँछन्। झापामा मात्रै नौ सय ८८ वटा पिलर छन्।पूर्वका सीमाविद् डा. पोखरेलका अनुसार २०२२ सालमा नेपाल सरकारले झापाका वासिन्दाले जग्गा नापजाँच गरेर धनीपुर्जा दिएको हो। ०४५ सालदेखि नेपालको भूमिमा भारतीयले हस्तक्षेप गर्न थालेका हुन्।
‘मेची नदीले धार परिवर्तन गरेसँगै सीमा क्षेत्रका जनताको जमिन पनि परिवर्तन भए। तर, परिवर्तन भएको जमिन उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्,‘ डा. पोखरेलले भने।दुवै देशबीच ‘पछि मिलाउने हाललाई स्थानीय ती जमिनमा बस्दै गर्छन्’ भनिएका जमिन पनि भारतले आफ्नो पोल्टामा पारिसकेको छ। पछिल्लो समय त्यसरी नै नेपाली लालपुर्जा भएका जमिनमा भारतीयले खेती गर्ने गरेका छन्। त्यही खेतीका बहानामा सीमामा पटक–पटक भारतीय र नेपाली सुरक्षाकर्मीबीच झडप पनि भएको छ। झापा जिल्लाको १४४.२ किमि क्षेत्रफल भारतसँग सीमा जोडिएको छ। यी स्थानका केही बासिन्दाले न आफ्नो भूमि भन्न पाएका छन्। न त आपत विपत पर्दा भूमिको उपयोग गर्ने अधिकार नै छ।
‘पहिले आफ्नो जमिन भनेर बसोबास खनजोत गरियो। त्यतिखेर बेच्नुपर्ने आवश्यकता थिएन लालपुर्जा छ भन्दै ढुक्क भएर बसियो,’ भान्सा खोलाका स्थानीय सञ्जीव थापाले भने, ‘०५२ सालमा भारतबाट सीमा नाप्दै आफ्नै आँगनमा आइपुग्दा बल्ल हामी त भारतमा पो परेका रहेछौं भनेर झसंग भयौँ।’सुरुमा उनीहरूले भोगचलन गरेको जग्गा नेपालमै थियो। सुगौली सन्धिपश्चात् सीमांकृत नेपालको जमिनमा भारतले २०४५ साल पिलर गाडेपछि भारततिर परेको स्थानीय बताउँछन्।
पछिल्लो समय दुवै देशका प्राविधिक टोलीले तयार गरेको डिजिटल नक्साले मापन गर्ने क्रममा सीमा क्षेत्रका जनतालाई यो समस्या आइपरेको हो। अहिले सीमामा यताउता परेका स्थानीयलाई सोही ठाउँमा भोग गर्न दिने, केही समय दुवै देशको बैठकबाट दुविधामा परेका जनताको समस्यालाई सुल्झाइने गरी निर्णय हुने भनेर सम्झौता गरिएको अर्का सीमा सचेतक चिन्तामणि दाहालले बताए।(अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक)
काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको सख्या बढेसँगै उपत्यका…
सुन व्यवसायी भन्छन् : मूल्य बढ्दै गयो,…